अमेरिकामा गयो शक्तिशाली भुकम्प – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/अमेरिकामा गयो शक्तिशाली भुकम्प
अमेरिकामा गयो शक्तिशाली भुकम्प
4,0263minutes read
काठमाडौं – मंगलबार साँझ अमेरिकामा शक्तिशाली भुकम्प गएको छ । अमेरिकाको आइदाहो राज्यमा ६ दशमलव ५ म्याग्निच्युडको भुकम्प गएको जनाइएको छ । उक्त भुकम्प ३० सेकेन्डसम्म महशुस गरिएको जनाइएको छ । भुकम्पबाट के कति क्षति भयो भन्ने विवरण आएको छैन ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसले अहिले अमेरिकामा धेरै नै प्रभावित पारेको छ । अमेरिकामा केरोनाका कारण ३ हजार ८ सय बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । भने १ लाख ८८ भन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् ।
हिन्दू धर्ममा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको सम्बन्धमा सृष्टि स्थिति र लयसँग जोडेर मान्ने गरिएको पाइन्छ । उनीहरुलाई अजन्मा देवताको रुपमा मान्ने गर्छन् । उनीहरुको बाबु आमा नभएको भनेर पनि मान्ने गरिन्छ । तर, के यो सत्य हो ? के ब्रह्मा, विष्णु र महेशका बुबाआमा छैनन् ? वेदमा लेखिएको छ कि जो जन्म वा प्रकट हुन्छन्, ती ईश्वर हुन सक्दैनन् । परमेश्वर अजन्मा, अदृश्य र निराकार छन् ।
शिव पुराणका अनुसार, ब्रह्मा सत्य र अविकारी छन् । सुरुवाती समयमा ब्रह्माण्ड अन्धकारमय थियो । त्यतिबेला पानी थिएन, आगो थिएन, हावा थिएन । प्राचीन शास्त्रहरुले समेत ब्रह्मालाई सत् मानेका छन् । सत् अर्थात् अविनाशी । तिनै अविनाशी परब्रह्मलाई एक दिन एकभित्र धेरै हुने संकल्प उदित भयो । त्यतिबेला ती निराकार परमात्माले आफ्नो लीला शक्तिले आकारको कल्पना गरे ।
जो मूर्ति रहित परब्रह्म हुन् । परब्रह्मको अर्थ एकाक्षर ब्रह्म । परम अक्षरवाला ब्रह्म । उनै सर्वोच्च ब्रह्म भगवान सदाशिव हुन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । अर्वाचीन र पुरातन विद्वानहरु उनीहरुलाई नै ईश्वर भन्छन् । सदाशिवले जहिले जहिले स्वेच्छाबाट आफ्नो विग्रहको माध्यमले शक्तिको सिर्जना गरे । जुन उनको आफ्नै श्रीअंगबाट कहिल्यै अलग हुने खालको थिएन । सदाशिवको त्यो परम शक्तिलाई प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्वको जननी तथा र विकार रहित मान्ने गरिएको छ ।
त्यो शक्तिलाई अम्बिका पनि भनिन्छ (पार्वती वा सती होइन) । उनलाई प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी (ब्रह्मा, विष्णु र महेशकी आमा), नित्य र मूल कारण पनि भनिन्छ । सदाशिवद्वारा प्रकट गरिएको सो शक्तिको ८ भुजाहरु छन् ।
सदाशिव एकाकीन भएर पनि माया शक्तिको संयोगले धेरै हुने गर्छन् । त्यही शक्तिकी देवीले नै लक्ष्मी, सावित्री र पार्वतीको रूपमा जन्म लिए । त्यो कालरुपी ब्रह्मा सदाशिवले उही समयको शक्तिले ’शिवलोका’ नामको क्षेत्र सिर्जना गर्‍यो । त्यो उत्तम क्षेत्रलाई काशी भनिन्छ । त्यसैलाई मुक्तिको ठाउँ मान्ने गरिन्छ । यहाँ शक्ति र शिव अर्थात् कालरुपी ब्रह्मा र दुर्गा यहाँ पति र पत्नीको रूपमा बस्छन् भन्ने मान्यता छ ।
को हुन् विष्णु ?
प्राचीन कालमा सूर्यको नाम नै विष्णु थियो । विष्णुको अलावा त्यतिबेला सूर्यलाई चिनाउन शक्र, अर्यमा, धाता, पूषा, सविता, मित्र, वरुण आदि नामले चिनिने गरेको विष्णु पुराणमा उल्लेख छ । विष्णु पुराणमा भनिएको छ :
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च, जंज्ञाते पुनरेवच
अय्र्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैवच
महाभारतमा पनि परापूर्वकालमा सूर्यको नाम विष्णु नै थियो ।
‘वियद् विष्णुपदं वापी पुंस्याकाश विहायसी’ भनेर विष्णु पद आकाशको नाम हो समेत भनिएको छ ।
इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुष्ये दशास्या
व्यस्कभ्नारोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितोमयूखै:
अर्थात्, हे सूर्य, यस द्युलोक र भूलोकलाई समेत तपाईंले धारण राख्नु भएको छ । आफ्नो अनन्त किरणहरु अर्थात् आकर्षण शक्तिले पृथ्वीलाई चारै तर्फबाट धारण गर्नुभएको छ । यसमा मयूखै शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।
हामीले अहिले भन्ने विष्णुमा जुन गुणहरु रहेको छ । ती कल्पित विष्णुमा पनि उस्तै किसिमको गुणहरुको चर्चा गरिएको छ । विष्णु दुई पूर्ण अक्षरको भिन्दाभिन्दै अर्थ लगाइए जसरी यसको दुई समस्त पदहरुमा समेत दुईदुई समस्त पद रहेको पाइन्छ । जस्तो सूपर्ण नाम सूर्यको किरणको हो । तर, गरुडको समेत नाम सुपर्ण हो ।
खेदि, किरण, गौ, रश्मि, अभिशव, दीधिदय:, गभस्ति, वन, उस्र, वशु, मरीचि, मयूख, सप्तऋषि, साध्य र सुपर्ण यी सूर्यका १५ वटा किरणहरुको नाम हो । यसैमा सुपर्णको समेत नाम उल्लेख छ । यसरी सूर्य र विष्णुको गुणमा धेरै समानता देखाइएको छ । सूर्यको र विष्णुको बाहन नै एकै भएकोले पनि सूर्यलाई नै विष्णु भनिएको मान्ने चलन छ ।
अर्कोतर्फ, अद्रि नामले सर्प र मेघलाई जनाउने गर्छ । यही अद्रिलाई एकातर्फ सूपर्ण सूर्यको किरणले मेघमार्फत् पानी खान्छ भने अर्को तर्फ सूपर्ण गरुडले पनि अद्रि नामको सर्पलाई खाने गर्छ । यसबाट पनि हामीले विष्णुलाई सूर्यसँग पर्यवसान गर्न सक्छौं । विष्णुलाई स्थितिकर्ता भन्ने गरिन्छ ।
विष्णुको क्षीर सागरको परिकल्पना
अम्बर, वियत्, व्योम, बर्हि, धन्क अन्तरिक्ष, आकाश, आप्, पृथ्वी, भू, स्वयम्भू, अध्वा, पुष्कर, सगर, समुद्र, अध्वर यी १६ नाम आकाशको नाम हो । यस समुद्र शब्द समेत विद्यमान हो । निघन्टु भाष्यमा ‘समुद्र’ शब्दको निरुक्तिलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
‘तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते समुद्र: कस्मात् समुद्रवन्त्यस्मादाप:’
पृथ्वीमा जो जलसमूहको स्थान छ । त्यसलाई पनि समुद्र भनिन्छ । समुद्र शब्दको विग्रह गर्दा समुन्द्रवन्ति अस्मात् आप: अर्थात् जसबाट पानी द्रपीभूत भएर पृथ्वीमा झर्ने गर्छ। आकाशबाट नै जल पृथ्वीमा झर्ने गर्छ । त्यसैले पनि क्षीर सागरमा बस्ने भनिएका विष्णु सूर्य नै हुन् भन्न सकिन्छ। यसबाहेक अप् शब्द, सागर शब्द, शेष नाग, अनन्त, हरि, चतुर्भुज, अष्टभुज, दशभुज आदिले पनि यही विषयलाई जनाउने गर्छ ।
विदेशमा मृ’त्यु भएका २४६ नेपालीको श’व स्वदेश ल्याइयो
टोकियोमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, अनावश्यक हिडडुल नगर्न आग्रह
‘पठाओ’का सहसंस्थापक हात, खुट्टा, टाउको का’टेर टु’क्राटुक्रा पारिएको अवस्थामा फेला
अमेरिकाले प्रयोगमा ल्याएको औषधि के हो के यसले कोभिड-१९ निको पार्छ ?
को’रोनाबाट ब’चाउ’न भारतबाट नागरिक लिन रुस उडेको जहाजका पाइलट नै को’रोना सं’क्र’मि’त भेटिएपछि..